ibhethri Modern "The Beast" ihlukile kuleyo ke ongasebenza ukuphila kwebhetri isikhathi eside kakhulu kuneminyaka nezinye brand. It has amandla anele okusheshayo ukuqala injini, ukuze ubhekane ngokuphumelelayo nalesi evuthayo esihlalweni umsebenzi kule moto, kanye umsebenzi okhokhelwayo umsindo uhlelo nezinye izinto amandla khudlwana. Ochwepheshe bathi cishe noma nini sebhetri unyaka "The Beast" kuvumelana ngokuphelele ngisho ne isiqongo imithwalo. Le divayisi futhi ihlale ikulungele ukusiza umnikazi imoto ukuqala injini imoto yakhe, kungakhathaliseki ukuthi izimo zezulu.
Uma wenza ukuqhathanisa, kungenzeka ukuthola yokuthi ibhetri "The Beast" kuzihlaka kagesi etholakalayo ngokuvamile bebakhulu analogue ezibizayo amazwe. Konke lokhu izinzuzo, kanye onjiniyela ukusebenza oluvelele bekulindeleke ukuthi ukusetshenziswa ekwakheni ibhethri ezinye ubuchwepheshe bamuva. Ezimweni eziningi, lokhu ucwaningo yasekuqaleni nokuthuthuka, okungokwendlela nomkhiqizi umkhiqizo.
Into esemqoka esihlukanisa ibhethri "Beast" kusukela lonke ibhethri - kuba hybrid inhlangano yayo ubuchwepheshe libizwa Calcium Plus. uhlelo okunjalo kunezinzuzo ikakhulukazi phezu zokukhiqiza esiphelelwe kakade, okuyinto zisasetshenziswa ibhizinisi ukuncintisana.
"Isilo" Ibhethri has izinzuzo ezilandelayo:
onjiniyela wazikhandla ukuze kuqinisekiswe ukunciphisa amanzi abilayo;
Ibhethri elisha ulula kakhulu kuka nozakwabo ithwala icala cishe egcwele;
kukhona ubuchwepheshe esiza isiqinisekiso ibhethri self-ukutjhatjhululwa.
"Animal" ibhethri has ipuleti omuhle labo abenziwe i ingxubevange lomthofu ne ukwengeza antimony. Le isixazululo ubunjiniyela kwandisa kakhulu ukumelana ibhethri ukudedelwa eqinile, lapho imvelo has a lokushisa okokuqandisa. amapuleti Negative esekelwe ingxubevange nomthofu-calcium. isakhiwo esinjalo kunganciphisa umphumela ibhethri self uze uphele du, aqede ke kusukela abilayo ezomile emanzini etholakalayo.
Modern futhi eliphezulu ibhethri "isilo" ithola Izibuyekezo omuhle kakhulu. Lokhu akusona isimanga. Abanikazi lokhu ibhethri Barat kwamanje ujabulela zonke izinzuzo komkhiqizo. Njengoba kukhona ukusetshenziswa kobuchwepheshe ezimbili, kuvumela ukwandisa izici eziningi kakhulu tekusebenta kwalesi sakhi. Futhi, lobuchwepheshe kudivayisi umkhiqizo omusha aqede bonke nemibi ubuchwepheshe ngalinye ngokuhlukile.
"Isilo" - ibhethri, okuyinto sihlanganisa zonke yesimanje izixazululo ubunjiniyela eziphambili. Zisetshenziswa ekudalweni kwendoda nowesifazane electrode engakhi ibhethri. Lobu buchwepheshe kusekelwe ushintsho strip metal, okuyinto kamuva sisalokhu. Konke lokhu kuzoholela yokuthi amapuleti ibhethri kuyoba ezibophayo kakhulu, futhi ngenxa yalokho, kancane ezithandwa ukugqwala. Lokhu waphinda kuqinisekisa ukuthi ngempela lo mkhiqizo ngeke sikwazi ukunikeza ukusebenza ephakeme kanye nekhwalithi ngokuhamba umsebenzi yayo yesikhathi eside.
Off-road amathayi "Niva" ezifuywayo amazwe
Cabin izihlungi "Reno Logan": esikhundleni, ukufakwa kanye nentengo
Mantra Positive kumele akhulunywa phambi kwesibuko njalo ekuseni
Ingabe uyazi ukuthi ungakwazi ukupheka, kodwa awukwazi udle?